Yakanakisa Brake Hose Assembly (yakajairwa neSAE J1401) Mugadziri uye Fekitori | Jinxing
Brake Hose Assembly (yakajairwa neSAE J1401)
Brake hose gungano ndiyo yakakosha chikamu chemotokari 'brake system. Kune epamberi zvigadzirwa zvekugadzira uye zvekuyedza michina mukambani medu kuona mhando yezvigadzirwa. Iyo mabhureki mabhureki akagadzirwa nesu ane maficha ekuputika kwesimba, yakaderera volumetric kuwedzera, yakanakisa mamiriro ekunze kusagadzikana uye zvichingodaro. Izvo zvigadzirwa zvinonyatso kutevedzera GB16897-2010, SAE J1401. Uye zvakare, isu takanyorerwa patent yezvigadzirwa zvakawanda.
Iyo hydraulic brake hose gungano inoumbwa neyakavhunika pombi uye bhureki pombi yakabatana. Iko kune kubatana kwekusingaperi pakati pebhureki reti bhureki uye iro rakaputsa pombi, uye kubatana kwacho kunoonekwa nekukorobha kana kutonhora kwekubuda kwechikamu chekubatana ichienderana neyese.
Iyo hydraulic brake hose gungano kana zvikamu zvinoenderana, pasi pemamiriro ekutaurwa ataurwa pamusoro apa, inofanirwa kukwanisa kuita zvinodiwa nemabasa zvinotsanangurwa muchinyorwa chino kana zvayedzwa maererano nenzira dzinotevera.
Inner hole throughput mushure mekukochekera
Yakakwirira inochinjika uye yakanyanyisa kudonha radius, mwenje uremu modhi yakawedzerwa kune DN 76
Chitarisiko chehosi: jira dhizaini pamusoro (glossy pamusoro inosarudzika yemukati dhayamita ye25.4mm kana zvishoma
Hose logo: kudhinda kana kunyora tsamba
Ruvara rwe Hose: nhema, tsvuku, bhuruu, yero, girini, grey, nezvimwe.
Iyo yekumisikidza nzvimbo idiki, yepakati uye yakaderera pombi yekumanikidza, oiri yekudzoka pombi (yekukweva pombi DN ≤ 31)
Mineral mafuta, mafuta ekubata chibharo uye rapeseed mafuta, glycol uye polyethylene glycol base mafuta, synthetic ester base mafuta, emulsified mafuta, mvura
Hose kuzivikanwa: HYDRAULIC HOSE EN857 1SC 1 ″ (DN25) WP 88BAR 1280PSI
Kuenderera mberi kwekushanda tembiricha renji: -40 ° F / + 212 ° F; -40 ° C / + 100 ° C
Kunonyanyisa kushanda tembiricha: 250 ° F 121 ° C
Chidimbu: SHF- inomira mhando
Rwomukati rabha rukoko: mafuta-asingagadzike ekugadzira rabha
Reinforcing rukoko: 1 rukoko yakakwirira tensile simbi waya chirukwa
Rokunze rukoko: mamiriro ekunze-asingagadzike ekugadzira rabha
Maitiro ekushandisa: EN 857 1SC uye IS 11237-1 1SC
Simbi tambo yakarukwa pombi, yakanyanya kumanikidza hosipaipi, yakanyanya kumanikidza hosi, hydraulic hose, hydraulic hose, yakashongedzwa hosi, yakanyanya tembiricha uye yakakwira yekumanikidza yemafuta hosipa yesimbi chigayo kuvhura muchina
Pashure: Zvinhu zvenaironi Air akamedura Hose
Zvadaro: Yakarukwa Brake Hose
Mhepo Yakaputsa Hose Inoungana
Clutch chitiviri Assembly Kit